Amamịghe echiche (AI) na e-azụmahịa | ECommerce ozi ọma
Amamịghe echiche (AI) na e-azụmahịa
Gịnị kpatara o ji bụrụ ihe a na-akpọ Artificial Intelligence bụ n'ezie otu n'ime usoro kachasị mma ahịa azụmaahịa kọmputa gị nwere ike ịnweta? Ka anyị bido site na mmetụta dị iche iche na atụmatụ ọhụụ a nwere ike iwepụta site ugbu a gawa. N'ihi na dị ka a pụrụ isi kwuo ya, na dị ka azụmaahịa ọ bụla nke na-achọ imeziwanye ma bulie nsonaazụ ya, ọgụgụ isi nwere ike ịbụ ezigbo akụ nke ndị ọchụnta ego na ngalaba azụmaahịa a na-eto eto nwere ike ịnwe.
Na 35% nke ngụkọta ego ha nwetara, ire ngwaahịa na ire ere na ikpo okwu e-commerce nke Amazon dị n'etiti akụkọ ndị na-ere ahịa na-aga nke ọma. Teknụzụ dị a isaa na-akwalite ọnọdụ ntụgharị a? Ngwaahịa nkwanye ngwaahịa nke Amazon, nke a na-enyere aka site na ọgụgụ isi ma ọ bụ AI.
Ewezuga nkwenye ngwaahịa, ọgụgụ isi na ụlọ ọrụ e-commerce ka ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-eji arụ ọrụ mkparịta ụka, nyochaa nzaghachi ndị ahịa, ma nye ndị ọrụ ịntanetị ọrụ ahaziri iche.
1 Omume nke ọgụgụ isi
2 Ngwaọrụ na e-commerce
3 Mmetụta nke AI?
4 Nhazi nke AI na e-commerce?
5 Njikwa ngwa ahịa
6 E-azụmahịa ụlọ ọrụ
7 Ngwọta na ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
8 Nyocha azụmahịa
9 Teknụzụ dị ka nzọ doro anya
10 Gbanwee ndị ahịa nwere ike
Omume nke ọgụgụ isi
N'ezie, nyocha nke Ubisend mere na 2019 chọpụtara na 1 n'ime 5 ndị ​​na-azụ ahịa dị njikere ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ site na chatbot, ebe 40% nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị na-achọ nnukwu azụmahịa ma zụta onyinye site na nkata.
Ọ bụ ezie na ahịa e-commerce zuru ụwa ọnụ ga-eru $ 4.800 ijeri na 2021, Gartner buru amụma na ihe dị ka 80% nke mmekọrịta ndị ahịa niile ga-ejikwa teknụzụ AI (na-enweghị mmadụ ọ bụla) maka afọ 2020.
Yabụ kedu AI na Ecommerce na-agbanwe ahụmịhe ịzụ ahịa na 2019? Site n’isiokwu a, ka anyị lelee ụfọdụ ngwa dị mkpa nke ọgụgụ isi na-azụ ahịa e-commerce yana ụfọdụ ihe atụ ụlọ ọrụ dị adị n’ezie.
Kedu ka ọgụgụ isi si agbanwe ahụmịhe ịzụ ahịa?
Ojiji nke ọgụgụ isi na ịzụ ahịa n'ịntanetị na-agbanwe ụlọ ọrụ e-commerce site n'ibu amụma usoro ịzụ ahịa dabere na ngwaahịa ndị ahịa na-azụ na mgbe ha zụrụ ha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ndị na-azụ ahịa ọnlaịnụ na-azụkarị ụdị osikapa kwa izu, ndị na-ere ahịa n'ịntanetị nwere ike izigara ndị na-azụ ahịa ihe onyinye a ahaziri iche maka ngwaahịa a, ma ọ bụ jiri nkwanye mmụta na-enyere igwe aka maka ngwaahịa ndị na-aga nke ọma na efere osikapa .
Ngwaọrụ na e-commerce
Ngwaọrụ Ecommerce AI ma ọ bụ ndị enyemaka dijitalụ enyere AI aka, dị ka ngwa ọrụ Duplex nke Google, na-emepe ikike dịka ịmepụtara ndepụta ịzụ ahịa (site n'olu ndị zụrụ ahịa) na ọbụnadị itinye iwu nzụta n'ịntanetị maka ha.
N'etiti ngwa ngwa nke AI na azụmahịa e-commerce nwere ụfọdụ dị irè karịa ndị ọzọ iji mezuo ebumnuche na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmahịa n'ịntanetị. Site na nke a, ekwesiri ighota na ebe enwere otutu elele nke ọgụgụ isi na Ecommerce, lee 4 isi ngwa nke AI maka Ecommerce nke na-achịkwa ụlọ ọrụ taa.
Nkata na ndị ọzọ na-enyere aka. Ndị na-ere ahịa e-commerce na-atụgharịwanye na-akparịta ụka bots ma ọ bụ ndị enyemaka dijitalụ iji nye nkwado 24 × 7 na ndị ahịa ha n'ịntanetị. Ewubere na teknụzụ ọgụgụ isi ọgụgụ isi, igwe na-akparịta ụka na-abawanye nghọta ma na-enye ohere maka ahụmịhe ndị ahịa ka mma.
Mmetụta nke AI?
Na mgbakwunye na inye ezigbo nkwado ndị ahịa, ndị na-akparịta ụka na-abawanye mmetụta nke AI na azụmahịa azụmahịa site na ike dịka ndị a:
Nchịkwa asụsụ (ma ọ bụ NLP) nke nwere ike ịkọwa mmekọrịta mmekọrịta na ndị na-azụ ahịa.
Adreesị ndị ahịa chọrọ site na nghọta miri emi.
Nkuzi nke onwe nke na enyere ha aka imezi ihe karie oge.
Nye ndị ahịa ahaziri iche ma ọ bụ ezubere iche.
Nkwado ngwaahịa dị mma
N'etiti ngwa AI kachasị elu na e-commerce, nkwenye ngwaahịa ahaziri iche maka ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị na-abawanye ọnụego ntụgharị site na 915% na usoro iji usoro 3% gbasoo. N'iji data buru ibu, AI na Ecommerce na-emetụta nhọrọ ndị ahịa site na ihe ọmụma banyere ịzụrụ n'oge gara aga, ngwaahịa ndị achọrọ, na àgwà nchọgharị n'ịntanetị.
Nkwado ngwaahịa na-enye ọtụtụ elele maka ndị na-ere ahịa ecommerce, gụnyere:
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ahịa na-alọghachi
Mma njigide na ahịa
Ahụmịhe ịzụ ahịa nkeonwe maka ndị ahịa na ntanetị
Kwado mgbasa ozi email azụmahịa.
Nhazi nke AI na e-commerce?
Ejiri n'etiti usoro kachasị dị irè, ịhazi onwe onye bụ isi nke AI na azụmaahịa ecommerce. Iwulite na otu data anakọtara site na onye ọrụ ọ bụla n'ịntanetị, AI na mmụta igwe na Ecommerce na-enweta nghọta dị mkpa nke onye ọrụ site na data ndị ahịa.
Dịka ọmụmaatụ, ngwá ọrụ AI kwadoro, Boomtrain, nwere ike nyochaa data ndị ahịa site n'ọtụtụ ntụpọ aka (gụnyere ngwa mkpanaka, mkpọsa ozi ịntanetị, na weebụsaịtị) iji hụ etu ha si eme mmekọrịta ịntanetị. Nghọta ndị a na-eme ka ndị na-ere ahịa e-commerce na-eme nkwanye ngwaahịa kwesịrị ekwesị ma na-enye ahụmịhe onye ọrụ na-agbanwe agbanwe n'ofe ngwaọrụ.
Nlekọta oru oma nke oma bu ichota ihe kwesiri ekwesi nke nwere ike izute onu ahia n’enweghi ego obula.
Ọ bụ ezie na ụzọ eji eme njikwa ihe na-ejedebe na ọkwa ngwaahịa ugbu a, njikwa ngwongwo AI kwadoro nyeere ụzọ iji jigide ebuka dabere na data metụtara:
Ọnọdụ ahịa na afọ ndị gara aga
Eburu ma ọ bụ atụ anya mgbanwe na-achọ ngwaahịa
Ekwe omume-n'akụkụ mbipụta nwere ike mmetụta atọ ndị yiri nkata etoju
Na mgbakwunye na njikwa ngwongwo, AI na-enyere njikwa ụlọ nkwakọba ihe na ntoputa nke ígwè ọrụ na-akpaghị aka nke a na-eme atụmatụ dị ka ọdịnihu nke ọgụgụ isi artificial na azụmahịa e-commerce. N'adịghị ka ndị ọrụ mmadụ, a pụrụ iji ígwè ọrụ AI iji chekwaa ma ọ bụ weghachite ngwaahịa 24x7 yana izipụ ngwa ngwa nke ihe ndị enyere n'iwu mgbe usoro ịntanetị.
Na mgbakwunye na igbanwe ụlọ ọrụ e-commerce n'ọtụtụ ụzọ, AI na mpaghara E-commerce B2B na-ebugharị ọtụtụ azịza ohuru. Ka anyị lelee ụfọdụ ihe ọmụmụ ụlọ ọrụ na-adịbeghị anya gbasara ọgụgụ isi nke na-emetụta ngalaba a.
Ihe Ntuziaka AI kwadoro maka Ecommerce Industry
Teknụzụ ndị dabeere na AI na-ewebata ọtụtụ ndị na-ere ihe n'ịntanetị n'ọtụtụ ngwaahịa ha na-amadịghị adị na ahịa ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ teknụzụ dabeere na AI na-enyere ndị ahịa dijitalụ aka ịkwado ngwaahịa ọhụrụ na ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị dabere na usoro ịzụ ahịa nke onwe ha na nghọta data.
E-azụmahịa ụlọ ọrụ
Agbamume site na ihe ịga nke ọma nke Amazon Alexa ngwaọrụ, a e-azụmahịa ibu na-ewebata Alexa olu ịzụ ahịa usoro, nke na-enye gị ohere inyocha Amazon kasị mma kwa ụbọchị amụọ na-etinye zuo iwu online na dị nnọọ olu gị. Kedu ihe ọzọ? Amazon Alexa nwekwara ike inye wodrobu Atụmatụ, gụnyere nke kacha mma ejiji n'ịgwa, na a tụnyere n'etiti uwe na ihe ga-adị mma na gị.
AI na ụlọ ọrụ e-commerce ejiji na-ebelata ọnụọgụ nke ngwaahịa nke azụrụ site na ntanetị n'ịntanetị. Dịka ọmụmaatụ, ụdị ejiji Zara na-etinye ikike AI iji gosipụta ụdị uwe kwesịrị ekwesị (dabere na nzụta onye zụrụ ahịa) yana ụdị mmasị ha (akwa akwa ma ọ bụ nke dabara adaba). Nke a nwere ike inyere ụdị ejiji aka belata nloghachi ngwaahịa ya ma melite ịzụrụ ihe ọzọ.
Na mgbakwunye na mgbanwe ndị a, azịza nke AI na-agbanwe ụlọ ọrụ e-azụmahịa na mpaghara ndị a:
Ahịa email nke AI kwadoro nke na-eziga ozi ịntanetị maka ngwaahịa (ma ọ bụ ọrụ) ndị nwere mmasị na onye nnata. Na mgbakwunye na ịgụrụ mmadụ karịa akpaghị aka, ngwaọrụ ndị a na-ere ahịa email na-eme nyocha nke onye ọrụ nke nwere ọgụgụ isi dabere na nzaghachi ha ma kwekọọ na mkpa nke onye ahịa.
Azụmahịa a na-enye ntinye aka nke AI nke na-enyere njikwa njikwa dị mma maka nyiwe e-commerce. Uru ndị ọzọ gụnyere ike ịme mkpebi azụmaahịa metụtara ndị na-ere ahịa, oge ndu, yana mkpa ahịa.
Ngwá ọrụ nyocha nke dabeere na ọgụgụ isi nke artificial maka ụlọ ọrụ e-commerce nke na-enye ọtụtụ uru dịka ọgụgụ isi azụmahịa, profaịlụ ndị ahịa, na nyocha ahịa n'ịntanetị.
Ngwọta na ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
Omnichannel AI ngwọta nke na-ekepụta ahụmịhe ahịa na enweghị ahịa gafee brik na ngwa agha na ụlọ ahịa ntanetị n'ịntanetị. Ọmụmaatụ, Sephora's AI based omnichannel solutions na-eji nchikota nke AI na mmụta igwe, nhazi asụsụ okike, yana ọhụụ kọmputa iji gbochie ọdịiche dị n'etiti ụlọ ahịa na ahụmịhe ndị ahịa n'ịntanetị.
Dị ka e mere ka ọ pụta ìhè n'isiokwu a, ọgụgụ isi na e-commerce na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịgbagharị ngwọta ọhụrụ na ahụmịhe ndị ahịa. Offọdụ n'ime ihe eji eme ihe maka ọgụgụ isi na e-commerce bụ ịzụ ahịa ahaziri iche, ndụmọdụ ngwaahịa na njikwa ngwa ahịa.
Dị ka onye na-ere ahịa n'ịntanetị, ị na-atụle otu esi etinye usoro ihe eji ọgụgụ isi arụ ọrụ maka azụmahịa gị? Ezubere maka AI na azụmaahịa Ecommerce, Ndị na-agụkọ ọnụ bụ ntọala nchịkọta data na-enye ike maka ndị na-ere ntanetị n'ịntanetị na azịza elebara anya na nchịkọta ngwaahịa.
Iji dozie nsogbu a, Twiggle na-eji nhazi asụsụ okike emechi, mejupụta ya, ma mechaa melite nsonaazụ ọchụchọ maka ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị. Companylọ ọrụ ọzọ na-achọ imeziwanye azụmahịa e-commerce bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dabeere na US bụ Clarifai. Ọrụ mbụ nke Clarifai lekwasịrị anya na ọhụụ nke ọchụchọ yana, dị ka ekwuru na weebụsaịtị ya, sọftụwia ahụ bụ "ọgụgụ isi nke nwere ọhụụ."
Companylọ ọrụ ahụ na-enyere ndị mmepe aka ịmepụta ngwa amamịghe nke "na-ahụ ụwa ka ị na-ahụ ya," na-enyere ụlọ ọrụ aka ịzụlite ahụmịhe ndị ahịa site na onyonyo dị elu na njirimara vidiyo. Leveraging igwe mmụta, AI software na-akpaghị aka na-akpado, hazie, na anya na-enyocha ọdịnaya site na ịkpado ihe oyiyi ma ọ bụ àgwà vidiyo.
Gụkwuo banyere ọzụzụ ha ahaziri iche, nke na-enye gị ohere iwulite ụdị omenala nke ị nwere ike ịkụziri AI iji ghọta echiche ọ bụla, ma ọ bụ akara ngosi, ngwaahịa, ịchọ mma ma ọ bụ Pokemon. Nwere ike iji ụdị ọhụrụ ndị a, yana ụdị ndị ewuru tupu (dịka, izugbe, agba, nri, agbamakwụkwọ, njem, wdg) iji chọgharịa ma ọ bụ chọọ akụ multimedia site na iji akara ngosi ma ọ bụ myirịta ọhụụ.
Teknụzụ dị ka nzọ doro anya
Teknụzụ ọgụgụ isi artificial na-enye ụlọ ọrụ asọmpi uru ma dị maka ndị mmepe ma ọ bụ ụlọ ọrụ nha ọ bụla ma ọ bụ mmefu ego. Otu ezigbo ihe atụ bụ mmelite Pinterest na ndọtị Chrome ya, nke na-enye ndị ọrụ ohere ịhọrọ ihe site na foto ọ bụla na ntanetị, wee jụọ Pinterest ka ha mee ihe ndị yiri ya site na iji sọftụwia ihe ngosi onyogho.
Ọ bụghị naanị na Pinterest na-ewebata ahụmịhe ọchụchọ ọhụụ na AI. Ndị na-azụ ahịa na-ekwu ọsọ ọsọ maka njikwa mkpali dị ka nyiwe ngwanrọ ọhụrụ nke na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ e-commerce mepụta ikike ịchọpụta ihe ọhụụ.
Na mgbakwunye ịchọta ngwaahịa dabara adaba, AI na-enye ndị na-azụ ahịa ohere ịchọpụta ngwaahịa ndị mgbakwunye, ma ọ bụ nha, ụcha, ọdịdị, akwa, ma ọ bụ ọbụlagodi akara. Ikike anya nke mmemme ndị ahụ bụ enweghị oke.
Site na mbu inweta ihe ngosi ihe ngosi site na onyonyo a na-ebugo, sọftụwia ahụ nwere ike inyere onye ahịa aka ịchọta ngwaahịa ha chọrọ. Ndị ahịa agaghịzi achọ ịzụ ahịa iji hụ ihe ha ga-achọ ịzụta.
Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmasị uwe ọhụrụ nke enyi ma ọ bụ ọhụụ ọhụrụ nke onye ọrụ ibe gị si na mgbatị ahụ. Ọ bụrụ na enwere ihe ngosi, mgbe ahụ AI na-enye ndị ahịa ohere ịchọta ihe ndị yiri ya site na ụlọ ahịa ecommerce.
Gbanwee ndị ahịa nwere ike
Dabere na Conversica, opekata mpe 33% nke ahịa ahịa anaghị eso ndị otu ahịa. Nke a pụtara na ndị ikike izizi ruru eru nwere mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị dabara na mgbawa a na-apụghị izere ezere.
Ọzọkwa, ọtụtụ azụmaahịa ejiri data data ndị ahịa na-anaghị achịkwa nke ha na-eme obere ma ọ bụ ihe ọ bụla. Nke a bụ ịtụnanya ọgụgụ isi dị egwu nke nwere ike iji meziwanye ahịa ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị eleru anya na ụlọ ọrụ na-ere ahịa, a na-ejiworị njirimara ihu iji jide ndị ohi site na i scanomi ihu ha na igwefoto CCTV.
Mana olee otu enwere ike isi jiri AI iji melite ahụmịhe nke ịzụ ahịa nke onye ahịa?
Fọdụ azụmaahịa na-eji mmata ihu iji jide oge ndị ahịa na-ebi n'ụlọ ahịa nkịtị. Nke a pụtara na ọ bụrụ na onye ahịa etinye oge dị ukwuu na ngwaahịa a kapịrị ọnụ, dịka ọmụmaatụ iPod, mgbe ahụ a ga-echekwa ozi a maka ojiji na nleta ha ọzọ.
Dị ka AI na-amalite, anyị na-atụ anya onyinye pụrụ iche na ntanetị ndị ahịa dabere na oge nọrọ na ụlọ ahịa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ndị na-ere ahịa n'igwe ọ bụla na-amalite inwe ọganihu na ikike ha nwere ịkọgharị ndị ahịa.
Ihu ahịa na-agbanwe na azụmaahịa na-aza ozugbo na onye ahịa. Ọ dị ka a ga - asị na azụmaahịa na - agụ uche ndị ahịa yana ekele niile maka data ejiri na AI. Fọdụ isi okwu eji eme ihe maka ọgụgụ isi na e-commerce bụ ịzụrụ ahaziri iche. Iji chọgharịa ma ọ bụ chọọ multimedia akụ na iji mkpado isiokwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Amamịghe echiche (AI) na e-azụmahịa
Ihe omuma nke akwukwo ozi na otu esi eweputa uzo diri ulo oru gi